Yintoni, ngokuchanekileyo, ngamanzi?
Amanzi ayindawo yonke emhlabeni wethu. Sizathu sokuba sinobomi bendalo. Uloba iintaba zethu, zidweba iilwandle zethu, kwaye ziqhuba imozulu yethu. Kuya kuba nengqiqo ukucinga ukuba amanzi kufuneka abe enye yezinto ezisisiseko. Enyanisweni, kunjalo, amanzi yinkampani yamachiza.
Amanzi njengeCompound kunye ne-Molecule
Iifom zenzakalo xa iifom ezimbini okanye ngaphezulu zenza izibophelelwane zamakhemikhali kunye. I-formula yekhempi yamanzi yi-H 2 O, ithetha ukuba i-molecule nganye yamanzi iqukethe enye i-athomu ye-oksijini ehambelana ne-athomu ezimbini ze-hydrogen.
Ngako oko, amanzi yinkomfa. Kwakhona i- molecule , nayiphi na iindidi zeekhemikhali ezenziwe ngama-atom amabini okanye ngaphezulu atyhibeneyo. Iimodyuli kunye nekhampani zithetha into efanayo kwaye zingasetyenzisiswa ngokungafaniyo.
Ngamanye amaxesha kuvela ukudideka ngenxa yokuba iincwadana ze "molecule" kunye '' nequmrhu 'azizange zihlale zicacile. Kwixesha elidlulileyo, ezinye izikolo zafundisa iamolekyuli ezibandakanya ii-athomu ezinxulumene nezibophelelo zeekhemikhali, kunye neengxube zenziwe ngama- ionic bonds . I-hydrogen kunye ne-oksijini ye-oksijini emanzini ihlanganiswe ngokukhawuleza, ngoko ke phantsi kwezi ngcaciso ezidala, amanzi aya kuba yi-molecule, kodwa ayikho i-comound. Umzekelo wenkomfa uza kuba yitheyibhile ityuwa, i-NaCl. Nangona kunjalo, njengoko izazinzulu ziye zaza kuqonda ukudibanisa imichiza engcono, umgca phakathi kweeonic kunye nezibophelelwano ezinamaxinzelelo zaza zaba ziqhumane. Kwakhona, ezinye iamolekyu ziqulethe iibhonic kunye ne-covalent bonds phakathi kwee-atom ezahlukeneyo.
Isishwankathelo, inkcazo yanamhlanje yelinye iqela lihlobo lomlambo oluqukethe ubuncinane ezimbini iintlobo zeeathom.
Ngaloo nkcazo, amanzi ayenzi i-molecule kunye nekhamera. I-oksijesi yegesi (O 2 ) kunye ne-ozone (O 3 ), umzekelo, iya kuba yimimiselo yezinto ezikhoyo kodwa ziyi-molecule.
Kutheni Kutheni Amanzi Ayingekho
Ngaphambi kokuba abantu bazi malunga nama-athomu kunye nezinto, amanzi ayebhekwa njengento. Ezinye izinto zaquka umhlaba, umoya, umlilo, kunye namaxesha athile isinyithi, ukhuni okanye umoya.
Ngomnye wemveli, ungacinga ngamanzi into ethile, kodwa ayifanelekanga njengento ngokuchazwa kwenzululwazi. Inxalenye yinto equkethe uhlobo olulodwa kuphela le-athomu. Amanzi aqukethe ezimbini iintlobo zama-athomu: i-hydrogen kunye ne-oksijini.
Indlela Amanzi Ayingqayizivele
Nangona amanzi asemhlabeni wonke, yinto enqabileyo kakhulu ngenxa yendalo yobundlululo phakathi kweeathom. Nazi izimbonakalo ezimbalwa zayo:
Amanzi anxibelele kwisimo salo lwakhiwo lwamanzi ngaphezu kobunzima balo, kungenxa yokuba i-ice iyakhupha amanzi okanye amanzi.
Amanzi abe neqondo eliphezulu lokubilisa elisezantsi ngokusekelwe kwisisindo samathambo.
Amanzi adla ngokubizwa ngokuthi "i-solvent" yonke ngenxa yokumangalisa kwawo ukuchitha izinto ezininzi.
Ezi zakhiwo ezingavamile ziye zathintela kakhulu ekuphuhlisweni kobomi eMhlabeni kunye nasekuhambeni kwezulu kunye nokukhukhula komhlaba. Ezinye iiplanethi ezingenazo zityebi zamanzi ziye zahluke kakhulu kwiimbali zendalo.
Isihlandlo seMfazwe yaseVietnam
Imfazwe Yehlabathi II: I-Chance Vought F4U Corsair
Iibhloko ze-Blogs eziphezulu kwi-Transgender, ubulili, amabhinqa kunye namaGay amalungelo
Indlela yokwenza ikhandlela laseRoma
Indlela yokudibana namanye amaPagana
Iimpahla zeeMhlaba: iTaigas
Iyintoni Intlanzi Enkulu?